Ukuhlawula abaqalayo - Yintoni endingayibetha ngayo kuqala kwaye ndinokuqalisa njani?
Ukutshiza abaqalayo | DIY ezenziwe ngesandla
Iingcamango zokuthungela abaqalayo
Ukuba utsha ukuthunga, ufuna izixhobo ezisisiseko.
Isixhobo esihle sokuthunga - umsebenzi omuhle
Akukho msebenzi omuhle unokwenziwa ngaphandle kwezixhobo ezifanelekileyo. Xa kuthungwa, kubaluleke kakhulu ukuba usebenze ngokucophelela ukwenzela ukuba isiphumo sokugqibela sibukeka siphambili. Ukuba akukho ukusilela kweengcamango kunye neepateni, ngoko kuya kuqala ngezinto ezimbalwa nje ngoku. Nabani na omtsha ukuthunga kufuneka afune ukuba yintoni intonga ayithenga ngayo. Uninzi lwezambatho kunye neendlela zokugcoba zisebenzisa i-cotton yarn. Iingcali ziyahlukahluka kuxhomekeke kwizinto eziphathekayo kunye nezinto eziphathekayo.
Isixhobo esilungileyo saqalayo xa sithunga
Intambo akufanele ilondolozwe phantsi kweemeko. Amandla enkqantosi ephakamileyo kakhulu ayibalulekanga kuphela xa kuthungwa, kodwa nakwixesha elilandelayo. Akukho nto idangalisa ngaphezu komtya oqwengwe rhoqo kumatshini wokuthunga. Ngokuphindaphindiweyo oku kufuneka kufakwe. Oku akugcini nje ngeendleko zexesha, kodwa kunye neentliziyo kwaye ngokuqhelekileyo umnqweno wokuthunga ulahlekile. I-stitch ekuthiwa yokuthunga ayikho kuphela yabaqalayo abahamba phambili. Oku kufuthi kwenziwa nge-polyester kwaye ingasetyenziselwa zonke iifrikhi. I-Reihgarn ifanelekile ukuba i-seams yexeshana. Iinyembezi zikhawuleza kwaye zinokususwa ngokukhawuleza xa kusetyenziswe isigxina esifanelekileyo.
Nangona kunye neesisi, wonke umntu, kungekhona nje abo abatsha ukuthunga, kufuneka bakhethe izinto ezilungileyo. Izikrele zokuthambisa ezifanelekileyo, ezisetyenziselwa ukusika iimpahla, ziyimfuneko. I-screwors i-scissors inexesha elide, lisoloko lenziwe ngetsimbi enzima kwaye ilindele ixesha elide lokuphila, ukuba ayilunganga. Iphepha okanye ezinye izinto akufanele zinqunywe kunye naye - ingubo nje.
Akukho mida ekukhethiweyo kweendwangu. Yonke into iyafumaneka. Zonke izinto, yonke imibala - ecacileyo kunye nemibala kunye nawo onke amanani. Xa ukhetha i-substance, akukona mfuneko ukuba ukhethe i-market specialist. Kwi-intanethi kunokuthetha kakuhle. Kuqala, kudla ngokwaneleyo ukufumana ibhokisi yezintambo zokuhlala. Ngaloo, umqali oqalayo unokuzama ukuqala kwaye asebenzise. Emva kokuba iiplanga zilungile, unokwazi ukufumana iphrojekthi enkulu.
I-Schneidematte ayimfuneko ukuba ibe yinxalenye yezixhobo ezisisiseko, kodwa inceda kakhulu, ngakumbi ukuba imilinganiselo ikhona kuyo. Ukuba usebenza ne-roller blade, akufanele ukwenze ukukhusela umhlaba.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukubamba i-tape, izikhonkwane ezininzi ezineentloko ezahlukeneyo, ukuthunga iinaliti ezinobungakanani obuhlukeneyo kunye nobubanzi kunye nomhlukanisi womthungo, ukuba umkhonkco ungaboniswa kakuhle okanye iingubo ezinzima kakhulu.
Nabani na omtsha ukuthunga sele sele exhotyiswe kakuhle ngezixhobo ezisisiseko kwaye unokuvumela ukuba ubuchule bakhe bugijime.
Nabani na ongenakufumana ukuthunga okuphilileyo, kodwa kunokuba kube yinto yokuzilibazisa ezinikezelwe kwintambo kunye nenaliti, ngokusoloko engabonisi iingcamango.
Kufanele kube nengqiqo okanye isebenze. Kodwa uthini ukuthunga? Ithuba elifanelekileyo lokuphefumlelwa kunye nokuthunga iingcamango kukuhamba ngesixeko. Ngokuqhelekileyo ufumanisa izinto apho ingcamango ifika "Ndiyakwenza oko". Ukuba uyaphinda uvakalise nge-wardrobe yakhe, umntu ufumana iingubo eziye zaphela, kodwa zintle kakhulu ukuba zingabikho.
Fumana iingcinga ezintsha zokuthunga
Ngokomzekelo, i-jean endala ye-jeans inokuhlelwa kwakhona kwizinto ezininzi ezahlukeneyo. Umphezulu, ngoko i-strap nge-zipper kunye neengxowa zangasemva, iyakwazi ukuguqulwa ngokugqithisekileyo ibe zikhwama ze-chic.
Iingcamango zokuthunga nazo ziza kakhulu xa zithunga.
Imilenze ye-jeans isele isele ikulungele umqulu okanye iipokotshi ezincinci. Ngezicelo ezintle zothando zenzelwe izipho zingavela. Iingxowa ezincinci eziqulethe isigqebhezana - njengenye yezinto ezininzi zokuthunga.
Mhlawumbi kukho umntu ebudlelwaneni okanye kwisijikelezo sabangani abajongana nokuthunga. La maxesha amaninzi aneepateni ezininzi kunye neendawo ezininzi zokuhlala, ezinokuthi zibe zizinto ezibonakalayo. Kuba abantwana bangadalwa izikhwama zebele okanye i-chic kunye neefowuni ezifashisayo. Iipateni zokuthunga nazo ziyafumaneka phantse yonke indawo. I-gazini lezorhwebo linika amaphephancwadi azinzile ngokwasemakethe iminyaka. Umxholo ngamnye uqukethe umzekelo. Umzekelo, ukuba ufuna ukuthunga i-skirt entle, khangela indlela enjalo kwaye uqalise.
Kwiintengiso ezithengiweyo - oko ke, oko kunjalo, zincabile kakhulu - zingathengwa izinto ezizisa iNähideen ngakumbi. Incoko kunye nomthengisi okanye umnxeba uzisa iingcamango ezintsha zokuthunga.
Kuthiwani, umzekelo, ngezilwanyana ezincinci ezenziwe nge-terrycloth, ezinokuthi zithathwe kwibhabhati. Abantwana bayavuya ngokwenene kwaye imali eninzi igcinwe. Gcwalisa nje nge-foam uze ubeke kwi-heat heater emva kokuba uhlambe.
Iingcamango ezinkulu zokuthunga nazo ziyafumaneka kwi-Intanethi.
Yile ndlela iiblogi ezenziwe ngayo ezijongene nesi sihloko kuphela.
Ukucamngca imibono ngobuninzi. Ukuba unomdla othile kwisihloko esithile, uvele ungene kwincoko kwiblogi kwaye iindwendwe zihlala zinika iipatheni ezithunyelwa ngemizuzu embalwa nge-imeyile.
Ngoko ngokukhawuleza uza kuthunga iingcamango ezingenakwenzeka kuwe. Ukuba ufuna enye into eyinkimbinkimbi, kufuneka uhambe kwiiwebhusayithi ezihambelanayo. Kulapho uya kufumana imigaqo kunye neepatheni umzekelo iingubo ze-cocktail okanye i-suitous suit and costumes. Iingcamango zokuthungela zihlala zihlala zifumana zonke indawo-zikhangele kwaye zixhomekeke ekucingeni nasekudaleni.
I-Crochet yabaqalayo | Isweleko DIY
Ukuthunga - Umshini wokuthunga
Ukuthungca - Ziziphi iimpahla ezisebenzisayo?
Imisebenzi yezandla ze-DIY
Thelela ikhandlela | DIY
Ikhalenda elizayo - iKrismesi ye-DIY
I-Crochet intshontsho yabantwana - DIY
Iiklabhut zentsana ze-Crochet - DIY
I-Crochet yentshontsho yengane - DIY